C/salaan Caato oo warbixin ka qoray isku dhex yaacii dhanka warbaahinta ee ka dhashay dhacdadii Bariire – Xeernews24
C/salaan Caato oo warbixin ka qoray isku dhex yaacii dhanka warbaahinta ee ka dhashay dhacdadii Bariire
27. August 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Anigoo bartay wax badanna kusoo shaqeeyey Istaraatiijiyadda Saxaafadda (Strategic Communications) Waxaan jeclaystay in dhibaatadii shalay Bariirre ka dhacday iyo isdhex yaaca dhacay aan ka talo bixiyo.
Sababta igu kalliftayna ay tahay anigoo Dowladda maanta jirta wax ka keenay ayna I dhibayso gurigaan wax ka dhisay inuu gilgilmo ama wax gaadhaan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego Talooyin aan is leeyahay dhanka saxaafadda iyo qaabka loola tacaallo ayay anfacaysaa.
• Haddii shil dhaco waxaa muhiim ah in ay jirto hal cod oo loogu soo hagaago ka warbixinta iyo ka hadalka shilkaas si ay u yaraato is dhex yaaca iyo been abuurka. Khasab maaha in wasiir walba uu meeshuu doono ula ordo, Sarkaal walbana uu Facebookgiisu kusoo qoro.
• U kaadi illaa aad war saxan ka helayso si aad shacabka ugu wargeliso, Si kasta oo saxaafaddu ay kuusoo weydiiyaan, ogsoonow degdegsiinyo haday door dhalaan kaadsiinyana kiish lacagay dhalaan. Dhowr oo dhowr oo weliba saacado kale sii dhowr illaa aad ka helayso xaqiiqda jirta dabadeedna saxaafadda u sheeg.
• Beentu 24 saac bay buuqa iyo walaaca hakinaysaa Runtuna waa ABID. Qoraalada badan fasiraad badan bay kaa rabaan, Marnaba haddaad warqaddii hore been ku sheegtay tan labaad been kale haku sii rarin, wey KASII DARAYSAA. Runtu hadday dacar ka kharaar tahay SHEEG, khalad waa dhacaa Runta kaliya ayaa looga gudbi karaa.
• Weligaa ha yaraysan kalsoonida shacabka, degdegna haku sarrifan. Mar hadday kalsoonidu lunto 20 sano xitaa kuma soo noqoto. Shacabku qowlkaagay raacayaan ee yuusan kaa hallaabin.
• FACEBOOK iyo Twitter campaign ayaa lagu galaa ee dowlad laguma xukumo, markaad xukunka hesho waxaad haysataa warbaahinta Qaranka waxaana aad isticmaali kartaa kuwa goonida loo leeyahay oo aad shacabkaaga kula xiriiri kartaa. Weligaana Shacabkaaga ayaa ka horeeya Beesha Caalamka (Af Soomaali kusoo saar warbixinadaada)
• Marnaba ha isticmaalin Facebook ama Twiter gaar kuu ah ama dad kale ay kuu hayaan. Xusuusnow mar hadduu war kaa baxo dib uma tirtiri kartid oo sawiraa laga qaadan inkastoo aadan waxba ka ogayn qoraaladaas laakiin wixii magacaaga ku qoran ma oran kartid anigu malihi. (Tan aad baan uga digayaa)
• Isugu yeer saxaafadda oo dhan oo sii Shir Jaraa’id (Midka Suaalaha lagu weydiin karo) si aad shacabkaaga u fahansiiso dhabta jirta.
• Shil kasta oo dhaca dad baa masuuliyadda leh oo ka dambeeyay dhibaatadaas, Sida ugu dhakhsaha badan waa in sharciga loo hor keenaa dadkaas, Qofkii magacaaga kugu matalayay oo khalad sameeyayna waa inaad meesha ka saartaa, sharcigana marsiisaa si shacabka kalsoonidiisa aad u hesho.
• Ugu dambayn weligaa GUDDI HA U SAARIN! Wax Guddi uusoo hagaajiyay ma jiraan, waana dhabbe (Waddo) aan meeluu ku dhammaado lahayn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/Aato-170x114.jpg 114 170 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-27 09:57:272017-08-27 09:57:27C/salaan Caato oo warbixin ka qoray isku dhex yaacii dhanka warbaahinta ee ka dhashay dhacdadii Bariire
Reer Cali-Xaydh oo cod dheer ugu digay Hargeysa in ay Ilaaliso saamiga Qaybsiga... DHAGAYSO: Maxaa ka jira in Janaraal Galaal uu doonayay in Sargaal ONLF ah ku...